Xiaomi MI3ဖုန်းကို စင်္ကာပူမှ တိုက်ရိုက်မှာယူတင်သွင်းပေးသည်။
Home » Events » Announcement » Xiaomi MI3ဖုန်းကို စင်္ကာပူမှ တိုက်ရိုက်မှာယူတင်သွင်းပေးသည်။
Address: No: 346B Pyitharyar Street, 16/3 Ward, Thingangyun Township, 11071. Yangon, Myanmar
Contact Number: 0951 71862, +1 (503) 928 5984
Email Address: admin@moenatshin.com
Listed: May 26, 2014 5:27 pm
အများမျှော်လင့် စောင့်စားနေသော နောက်ဆုံးပေါ် Xiaomi MI3 ဖုန်းကို စင်္ကာပူမှ တိုက်ရိုက်မှာယူတင်သွင်းပေးပါသည်။ Apple ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် iPhone 5S ထက် ၃ဆ ပိုမြန်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Android ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean) နဲ့ လာပြီး Branded, Original, Unpacked ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၃ mega pixel camera က သာမန်အိမ်သုံး Camera ထက်တောင်အများကြီးသာလွန်ပါတယ်။ ပါးလွှာပြီး ဒီဇိုင်း အင်မတန်လှတဲ့ Xiaomi MI3မှာ ၁ နှစ် warranty ပါပါတယ်။
MI316GB Metallic Grey ဟမ်းဆက် ပါကင်
MI3Original Screen Protector တစ်ခု
MI3Original Case တစ်ခု – အရောင်ငါးမျိုးထဲမှ (Subject to availability)
ငွေပေးချေပြီး ၂၁ ရက်အကြာ မိုးနတ်သျှင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှာ ပစ္စည်းသွားရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဦးရာလူစနစ်၊ (Limited Stock) အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားသည်။
Ad Reference ID: 20053830d0a8fed5
For Sale MI3Redmi to sell Xiaomi
Listed by: moe nat shin
Other items listed by moe nat shin
Moe Nat Shin International Company Limited
Latest items listed by moe nat shin »
All times are GMT 6.5. The time now is 10:58 am.